प्रहरी अधिकृतले नै व्यवसायीको अपहरण गरेपछि - Kantipath.com
प्रहरी अधिकृतले नै व्यवसायीको अपहरण गरेपछि
काठमाडौं – प्रहरीका दुई अधिकृतले नै दुई महिनाअघि मेनपावर व्यवसायीको अपहरण गरी करिब डेढ करोड फिरौतीको कागज गरेर रिहा गरेको खुलेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)द्वय सम्बत लामा र सूर्यबहादुर थापाले अन्य दुई व्यक्तिसँग मिलेर मेनपावर व्यवसायी बद्री राईलाई अपहरण गरेका हुन् । दुवै सइसहित चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
उनीहरूले गत १ माघमा धुम्बाराहीस्थित टाइगर ओभरसिजका सञ्चालक बद्री राईलाई अपहरण गरेका थिए । अपहरणमा संलग्न सइसहित काभ्रेका अर्जुन कुमार लामा र रुपन्देहीका राजकुमार गुरुङलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले बुधबार पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका चारै जनालाई अपहरण मुद्दामा कारबाही अघि बढाइएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी प्रकाशजंग कार्कीले बताए । तस्करीको १५ किलो सुन लुटेको र त्यसवापतको पैसा चाहिने भन्दै उनीहरुले त्यसरी अपहरण गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुई महिनापछि उजुरी : राईलाई कोटेश्वरबाट अपहरण गरिएको थियो । उनीहरुले राइलाई दिउसो करिब १ बजे कोटेश्वरमा भेट्न बोलाएर मोटरसाइकलमा राखी गौरीगाउ“स्थित बाजेको सेकुवा रेष्टुरेन्टमा पुर्या‍एका थिए । रेष्टुरेन्टकै कोठामा बन्धक बनाई उनीहरुले २ लाख ३० हजार नगद लिएका थिए ।
त्यस्तै २५-२५ लाखको चेक काट्न लगाउनु्का साथै चारै जनालाई थप २५-२५ लाख दिने तमसुक बनाएर छाडिदिएका थिए । घटनाको करिब २ महिनापछि गत मंगलबार मात्र मेनपावर व्यवसायी राईले उजुरी गरेका हुन् । अपराध महाशाखाका डिएसपी अजय केसीको नेतृत्वमा मंगलबादेखि सुरु भएको अप्रेसनमा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् ।
यसरी भयो अप्रेसन : अपरहणमा परेका राईलाई अपहरणकारीको बारेमा विस्तृता थाहा थिएन । राजकुमार गुरुङको फोटो थियो । सोही फोटोका आधारमा डिएसपी केसीले खोजी सुरु गरे । बुधबार उनी लतिलपुरको भैंसेपाटीमा रहेको खुल्यो । उनी भारत जाने तयारीमा थिए । उनकै एक साथीलाई प्रहरीले प्रयोग गरी उनलाई पक्राउ गरेको हो । भारत जान लागेको थाहा पाएपछि ‘एक जना डिएसपीसाबको छोरा भारतमा हुनुहुन्छ, उहाँको लागि एउटा किताब लगिदिनुपर्यो‍’ भन्दै एक साथीमार्फत उनलाई आग्रह गरियो ।
एयरपोर्टमै किताब लिने सहमति भयो । डिएसपी केसीले एउटा किताब किनेर एक व्यक्तिलाई एयरपोर्टमा पठाए । किताब लिएलगत्तै उनको हातमा प्रहरीको हत्डकी लाग्यो । डिएसपी केसी उनलाई भैंसेपाटीदेखि नै पिछा गरी रहेका थिए । विमानस्थलमा पहिले नै एउटा टोली खटिसकेको थियो ।
योजनाकार सई : गुन्डागर्दीमा समेत संलग्न लामाले मेनपावार संचालक राई सुन तस्करीमा संलग्न भएको सूचना पाएका थिए । केही महिनाअघि बौद्धका फुर्पा शेर्पाले लुटेको १५ केजी सुनमा उनको पनि संलग्न रहेको सूचना पाएका थिए । सोही आधारमा उनलाई धम्काएर पैसा असुल्ने उनको योजना थियो ।
राजकुमारसँग उत्त प्रस्ताव ल्याएपछि उनले प्रहरीसँग मिलेर उक्त काम गर्ने योजना बनाए । गौशला वृत्तमा काम गर्ने सादा पोशाकका प्रहरीसँग उनको चिनजान थियो । सई सम्बत तामाङले पक्राउ शैलीमा अपहरण गरी पैसा असुल्ने योजना बनाए । सोही योजनाअनुसार उनलाई नियन्त्रणमा लिई पैसा असुलिएको थियो ।
Previous Previous post: देउवालाई जहाँ भेट्यो त्यही कुट्ने धम्कि
Next Next post: कहाँ गए राहदानी लिएका महिला ?
यी हुन् देश लुटेर अफ्रिकाकै धनी बनेकी महिला !
नेपालमा काेराेना संक्रमितको संख्या १८ हजार २ सय ४१ पुग्याे
श्रमजिवी पत्रकारलाई न्यूनतम तलव कति दिनुपर्छ ?
ओली र प्रचण्डका अगाडि देउवाले भने– ‘म त बर्वाद भएँ नि यार !’
बाउको विरासत तोड्दै कांग्रेसमा छिर्न थापाले दिए राप्रपाबाट राजीनामा (पूर्णपाठसहित)